Kheyre oo Kulan deg deg ah la qaatay Wasiiro, Duqa Muqdisho & Saraakiisha Ciidamada | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Kheyre oo Kulan deg deg ah la qaatay Wasiiro, Duqa Muqdisho &...
Kheyre oo Kulan deg deg ah la qaatay Wasiiro, Duqa Muqdisho & Saraakiisha Ciidamada
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa guddoomiyay kulan deg deg ahaa oo looga hadlay amniga caasimadda oo lagu qabtay taliska qeybta guud ee Booliska gobalka Banaadir.
Kulankan oo ay ka soo qayb galeen wasiirka amniga gudaha, guddoomiyaha gobalka Banaadir, taliyaasha ciidanka iyo khuburo amni ayaa diiradda lagu saaray dardar-gelinta iyo ka mira dhalinta qorshaha sugidda amniga dalka gaar ahaan amniga caasimadda.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa warbixin iyo tallooyin ka dhagaystay khuburada loo xil saaray aruurinta xogaha amni ee ay soo gudbiyaan laamaha amniga, waxa uuna ku ammaanay hay’adaha amniga dadaalka ballaaran ee ay ugu jiraan badbaadina nafta iyo hantida mawaadiniinta Soomaaliyeed.
Ugu dambeyn Ra’iisul Wasaaraha ayaa Hay’adaha amniga kula dardaarmay in ay laba jibaaraan dadaallada ay ugu jiraan xasilinta caasimadda si ummadda Soomaaliyeed ay u helaan nabad buuxda.
Si kastaba, kulankan ayaa ku soo beegmaya iyadoo Kooxaha dowladda ka soo horjeeda ay kordhiyeen weerada ay ka geystaan Caasimada, waxaana xalay Muqdisho ruxay qarax ka dhacay nawaaxiga Xeebta Liido.
Gelinkii danbe ee shalay gudaha Suuqa Bakaaraha waxaa lagu dilay Nin Oday ahaa, halka habeenkii ka horeeyay Dharkiinleey lagu dilay Wadaad kale, iyadoo isla Axadii Yaaqshid lagu dilay Nin Oday ahaa oo Masaajidka loogu galay isagoo Qur’aan akhrisanayay, dhamaan dadkan waxey ahaayeen xubnihii soo doortay Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya.
Previous articleSirdoonka Al Shabaab oo sida Jinniga u shaqeya & Xogo Lama filaan ah oo laga helay Basaasnimada Shabaab
Next articleWadanka Holland oo Aqoonsaday Passporka Somaliya Kuna dhawaaqay..
Waa Maxay Shaqada Diblomaasiyiinta Shisheeye ee fadhigooda yahay xarunta Xalane?
Soomaalida isticmaasho baraha bulshada oo la ogaaday khatar weyn kusoo wajahantahay oo laga dhaxlo internedka
Xog cusub oo laga helayo baaritaanka lagu hayo dilka guddoomiyihii D/Hodan
Xog:Axmed Madoobe oo laba sabab dartood uga baaqday calemeo-saarkii Lafta-gareen
Jubbaland oo ku dhawaaqday dagaal Al-Shabaab looga kicinayo Fariisinkii ugu weynaa
Miino aan qarxin oo laga soo saaray Xaafad ka tirsan Kismaayo (Daawo Sawirro)
Halkee DF marineysaa isu soo dhaweynta dalalka Eritrea iyo Jabuuti? (Aqri)
C/raxmaan C/shakuur oo ka hor-yimid baaqii dowladda Qatar, kuna eedeyay maalgelinta….
XOG: Lafta Gareen oo shuruud adag ku xiray ka qeybgalka caleema saarka Axmed Madoobe
”Waddamo badan siyaasigu wuxuu dejiyaa qorshaha dalkiisu ku noolaanayo sanado uu ogyahay inuusan isagu xilka hayn doonin”
Sawirro: Afhayeenka ONLF oo gaaray Addis-Ababa (Waa maxay qorshaha?)
DHAGEYSO: Xildhibaan Katirsan Golaha Shacabka Oo Dar daaran Cajiib Ah Siiyey Dadka Muqdisho Ku Wada…
Imaaraadka Carabta oo war kasoo saaray qaraxii duleedka Muqdisho.